March 2019 – Page4– Focus Myanmar
ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် ဝင်လုပ်ပီး အိုမင်းနေတဲ့ အဖိုးနဲ့ အဖွားကို လုပ်ကျွေးနေတဲ့ (၁၀) နှစ်သမီးလေး သူမရဲ့ ဖခင် ရုတ်တရက်သေဆုံးပြီးမိခင်ကလည်းတစ်ခြားယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ကလေးတွေဟာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားမယ်၊ကလေးဘဝကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အပျော်ဆုံးဖြတ်သန်းမယ်အမှတ်တရလေးတွေ ဖန်တီးကြမယ်ပေါ့။ တစ်ချို့ကြတော့လည်း သူတို့ အနာဂတ်တောက်ပဖို့ စာတွေကြိုးစား ကျက်မှတ်ကြပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီ ၁၀ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးကတော့ စာလဲ မလေ့လာနိုင်သလို၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လဲအချိန်မဖြုန်းနိုင်ရှာပါဘူး။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားကိုလုပ်ကျွေးဖို့ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်နေရလို့ပါ။ကောင်မလေးရဲ့ဖခင်ဟာ ပြင်းထန်တဲ့အက်စီဒန့်တစ်ခုကြောင့်ဆုံးပါးသွားခဲ့ရပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲမိခင်ကလဲနောက်ယောက်ျားနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုအဖိုးနဲ့အဖွားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သူမပဲရှိပါတော့တယ်။အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ဟာ၁၆နှစ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်လည်းကလေးတော်တော်များများကတော့၁၆နှစ်မတိုင်မီမှာပဲဝမ်းစာအတွက်အလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ်။ကောင်မလေးကတော့အခုလိုပြောရှာပါတယ်။“ကိစ္စမရှိပါဘူး၊အဖိုးနဲ့အဖွားအတွက်ဆေးရုံစရိတ်နဲ့ ဆေးဖိုး ပိုက်ဆံ လိုနေတာလေ”။ တကယ်တော့တစ်ချို့ကလေးတွေဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာတွေမှာအလုပ်လုပ်နေရပါတယ်။ကလေးတွေဟာအားနည်းတဲ့အတွက် ဒဏ်ရာ အနာတရနဲ့တစ်ခြားပြင်ထန်းတဲ့ဝေဒနာတွေရလွယ်ပါတယ်။သို့ပေမယ့်ဒီကောင်မလေးအတွက်ကတော့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာဝင်လုပ်နေရတာဟာဆင်းရဲလှတဲ့သူမမိသားစုအတွက်ဘုရားသခင်ကပေးတဲ့ဆုလာဒ်တစ်ခုပါပဲတဲ့။ ကလေးမလေးကအခုလိုထပ်ပြောရှာပါတယ်။“အဖိုးနဲ့အဖွားကိုနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခွင့်ပြုရတာထက်စာရင်နေရောင်အောက်မှာ အလုပ် လုပ်ရတာက ကျမအတွက် ပိုကောင်းတာပေါ့” ။ Credit – အထွေထွေဗဟုသုတ
လူရိုး ဆိုတာ သင်္ချိုင်းမှာပဲ ရှိတာမဟုတ်ပါ …အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုပါ။ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် ကေဆူဒါကရန်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ကန်ဟန်ဂတ်မြို့လေးက ဈေးထဲမှာ ဆိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်ပြီး ဈေးရောင်းတယ်။ သူ့ဆိုင်လေးမှာ ချိုချဉ်၊ အအေးနဲ့ ထီလက်မှတ်တွေ ရောင်းတယ်။ သူ့ဆိုင်ကနေ တစ်လကို ရူပီငွေ ၁၀,၀၀၀ (ကျပ်တစ်သိန်း ၂ သောင်း) လောက်တော့ ပုံမှန်လေး ရနေပါတယ်။ တမနက်ခင်းမှာ သူ့ဆိုင်မှာ ဝယ်နေကျ ဖေါက်သယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပီအရှိုကန်က သူ့ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး ထီလက်မှတ် ၁၀ စောင် ဖယ်ထားပေးပါ။ နောက်တနေ့မနက်မှာ လာယူမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီညနေမှာ ထီဖွင့်လို့ ဆူဒါကရန်က ထီတိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ အရှိုကန် ဝယ်ဖို့ ဖယ်ခိုင်းထားတဲ့ ထီလက်မှတ် ၁၀ စောင်ထဲက တစ်စောင်ဟာ ထီပေါက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ပေါက်တဲ့ဆုက ပထမဆုကြီး။ ရူပီငွေ...
စာမေးပွဲဖြေဖို့ ကျောင်းမှားရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းမှန်ပြန်လိုက်ပို့တဲ့ ယာဉ်ထိန်းကို ဆုချီးမြှင့်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုဖို့ ကျောင်းမှားရောက်ရှိလာတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၃ ယောက်ကို စာမေးပွဲအချိန်မှီဖြေနိုင်ဖို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲ့တွေကို ပြည်သူတစ်ဦးက ဆုငွေတွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ မတ် ၆ ရက်နေ့က ကျောင်းလွဲမှားရောက်ရှိတဲ့စမ်းချောင်း အ.ထ.က ၂ က ကျောင်းသား ၁ ဦးနဲ့ ကြည့်မြင်တိုင် အ.ထ.က ၂ က ကျောင်းသူ ၂ ဦးကိုယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန် အချိန်မီ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ပဲခူးမြို့မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေတဲ့ ကျောင်းသားတဦးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ Wood Htwe Trading Co; Ltd ရဲ့မန်းနေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးရဲမင်းထွေး က ယာဉ်ထိန်းရဲ ၂ ဦးကိုဂုဏ်ပြုဆုငွေ ကျပ် ၁ သိန်းစီ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အလှူရှင်ကိုယ်စား အမှတ် ၇ ယာဉ်ထိန်းရဲ ဒုတိတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူး ရဲမှူး...
ညကစာကျက်ထားတာကြောင့် စာမေးပွဲဖြေချိန်မှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ယာဉ်ထိန်းရဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက်သွားခေါ်ဆောင်ပြီး စာမေးပွဲခန်းကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မတ်လ ၇ ရက်နေ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်ဖြေဆိုရမယ့် နေ့မှာ ဒေါပုံ အ.ထ.က ၁ ကျောင်းမှာ ဖြေဆိုရမယ့် ကျောင်းသားတစ်ယောက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို လာမဖြေတာကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီဆက်သွယ်ကြည့်ရာ ညက စာကျက်နေတာကြောင့်ကျောင်းသားအိပ်ပျော်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းရှေ့မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကနေ မီးတန်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကျောင်းသား နေထိုင်တဲ့ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ယမုံနာ ၂ ရပ်ကွက် ကမ်းနားလမ်း ကို အိမ်အထိသွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး စာမေးပွဲခန်းကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့က ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ မနေ့က မတ်လ ၆ ရက်နေ့ကလည်း ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်နဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်က ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၃ ယောက် ကျောင်းမှားပြီး စာမေးပွဲဖြေဖို့ရောက်လာတာကြောင့် ကျောင်းအမှန်ကို ယာဉ်ထိန်းတွေက လိုက်ပို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မတ်လ ၆ ရက်နေ့က...
သထုံ မတ်(၆)ရက် သထုံမြို့ လိပ်အင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၁)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း တွင် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကဒ် မေ့ကျန်သော အောင်ကျင်းရပ်ကွက် အောင်မြေရွှေဘုံမှ ကျောင်းသားတဦး အား ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ကြပ်အောင်ချစ်ဦးမှကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ Credit သမိန်ဗြတ်စ
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲစဖြေတဲ့နေ့ပဲကြည်နူးဂုဏ်ယူစရာလေးတွေတွေ့ရပြီး…. စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့ #၅မိနစ်အလို ကြည့်မြင်တိုင် အထက၂မှာ ဖြေရမယ့် ကျောင်းသား လေးက စမ်းချောင်းအထက ၂မှာ ကျောင်းမှား လာဖြေတာ အချိန်ကလည်းငါးမိနစ်ပဲလိုတယ် … မိဘအုပ်ထိန်းသူတစ်ယောက်မှမပါ…စမ်းချောင်း ၂မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ ယာဉ်ထိန်း၊ရဲနဲ့မီးသတ်တွေက ကိုယ့် သားသမီးသဖွယ်စိုးရိမ်ပြီး ယာဉ်ထိန်းရဲဆ်ုင်ကယ်နဲ့ပဲ စာမေးပွဲအချိန်မှီဖို့ မီးတန်းဖွင့်ကာအရေးတကြီးလိုက်ပို့ ပေးနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးတကယ်ကြည်နူးစရာပဲ…. စာမေးပွဲအချိန်မှီပြီးဖြေနိုင်ပါစေညီလေး….. Ye Min
အသက် ၂ဝ အရွယ်မှာ သူတို့ဘာလုပ်နေကြသလဲ
အရွယ်ကောင်းချိန်၊ ငယ်ရွယ်နုပျိုချိန်မှာ ကြိုးစားရုန်းကန်ပါတဲ့… အသက်၂ဝဆိုတဲ့အရွယ်ဟာ ကြီးပြင်းပြီလား၊ အသက်၂ဝဆိုတဲ့အရွယ်ဟာ စိတ်ကူးအိပ်မက်နဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးနေသေးလဲ၊ အောင်မြင်ထင်ရှားသူတို့ရဲ့ အသက်၂ဝအရွယ်ကို ပြန်ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်၊ အဲဒီအရွယ်မှာ သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်နဲ့ သူတို့ဘယ်လောက်ဝေးနေခဲ့သေးလဲ… အသက်၂ဝအရွယ် အိုဘားမား (အမေရိကန်သမ္မတ) အဲဒီအရွယ်မှာ အိုဘားမားဟာ ဆေးလိပ်အရက်သောက်ရင်း ဦးနှောက်ခြောက်စရာတွေကို မေ့ပစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ၁၉၈၃ခုနှစ် ၂၂နှစ်အရွယ်အိုဘားမားဟာ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကနေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့ကျောင်းပြီးခဲ့တယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ သူဟာ လူမျိုးစုံသွေးနှောတဲ့နောက်ခံကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကို အလွယ်တကူမရခဲ့လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမ်ငယ်ခဲ့တယ်။ အဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကို သူဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတယ်။ ဥပမာ- ကျောင်းလစ်တယ်၊ အရက်သောက်တယ်၊ ဆေးလိပ်သောက်တယ်၊ ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်တဲ့ လူငယ်တစ်ဦးလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းအောင်းမေ့တိုင်း အိုဘားမားက “အဲဒီအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့တာဟာ “ငါဘယ်သူလဲ”ဆိုတဲ့ပြဿနာကို ခေါင်းထဲကနေညှစ်ထုတ်တာပဲ” လို့ဆိုတယ်။ ၁နှစ်အကြာမှာ အိုဘားမားဟာ ချီကာဂိုကိုသွားပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှာ ဥပဒေပညာကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်။ အသက်၂ဝအရွယ် ပူတင် (ရုရှားသမ္မတ) ဂျူဒိုလေ့ကျင့်တာကိုလက်လွှတ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဖြေခဲ့တယ်။ လူငယ်လူရွယ်ချိန်ခါမှာ...